floating LED စတုဂံမှန်နှစ်ဆစုပ် slate ရေချိုးခန်းအနတ္တ
floating LED စတုဂံမှန်နှစ်ဆ sinks slate ရေချိုးခန်း vanity ခေတ်သစ်စတိုင်အမှတ်တံဆိပ်： OKASA ကက်ဘိနက်ပစ္စည်း： မြောက်အမေရိက Ash ကိုအသုံးပြုမှု： ရေချိုးခန်းပရိဘောဂဝှမ်းပါဝင်သည်: ဟုတ်ပါတယ်မူလအစ： ရှန်ဟိုင်း，ကြေးမုံပါဝင်သည်: ဟုတ်တယ်မော်ဒယ်နံပါတ်: 7125 ကောင်တာ: ဟုတ်တယ်စတိုင်: ခေတ်သစ်စတိုင် Faucet ပါဝင်သည်： တပ်ဆင်ခြင်းမရှိပါ : floating ဝန်ကြီးအဖွဲ့အရွယ်အစား: 1600*550*680မီလီမီတာအာမခံ: 5-နှစ်…
သုတ်ပဝါထိန်သိမ်းနှင့်အတူ LED မှန်တစ်ခုတည်းစုပ်ရေချိုးခန်းကက်ဘိနက်
လက်သုတ်ထိန်သိမ်းနှင့်ခေတ်သစ်ပုံစံအမှတ်တံဆိပ်အမည်ပါသောမှန်ဘီလူးတစ်လုံးတည်းသော LED မှန်： OKASA ကက်ဘိနက်ပစ္စည်း： ထိုင်းရော်ဘာသစ်သားအသုံးပြုမှု： ရေချိုးခန်းပရိဘောဂဝှမ်းပါဝင်သည်: ဟုတ်ပါတယ်မူလအစ： ရှန်ဟိုင်း，ကြေးမုံပါဝင်သည်: ဟုတ်တယ်မော်ဒယ်နံပါတ်: 7124 ကောင်တာ: ဟုတ်တယ်စတိုင်: ခေတ်သစ်စတိုင် Faucet ပါဝင်သည်： တပ်ဆင်ခြင်းမရှိပါ : floating ဝန်ကြီးအဖွဲ့အရွယ်အစား: 1200*500*500မီလီမီတာအာမခံ: 5-နှစ်…
Double vanity ခရမ်းရောင်အစိုင်အခဲသစ်သားရေချိုးခန်းအချည်းနှီး
Double vanity ခရမ်းရောင်အစိုင်အခဲသစ်သားရေချိုးခန်းအချည်းနှီးခေတ်မီစတိုင်တံဆိပ်： OKASA ကက်ဘိနက်ပစ္စည်း： မြောက်အမေရိက Ash ကိုအသုံးပြုမှု： ရေချိုးခန်းပရိဘောဂဝှမ်းပါဝင်သည်: ဟုတ်ပါတယ်မူလအစ： ရှန်ဟိုင်း，ကြေးမုံပါဝင်သည်: ဟုတ်တယ်မော်ဒယ်နံပါတ်: 7693 ကောင်တာ: ဟုတ်တယ်စတိုင်: ခေတ်သစ်စတိုင် Faucet ပါဝင်သည်： တပ်ဆင်ခြင်းမရှိပါ : floating ဝန်ကြီးအဖွဲ့အရွယ်အစား: 1500*520*450မီလီမီတာအာမခံ: 5-တစ်နှစ်တာအကန့်အသတ်ရှိသောအာမခံချက်…
နံရံတစ်ခုသည်နံရံတစ်ခုတည်းနှင့်အတူတစ်ခုတည်းအချည်းနှီးသော Khaki ရေချိုးခန်းဗီရိုကိုချိတ်ထားသည်
စင်ပေါ်ခေတ်မီပုံစံကုန်အမှတ်တံဆိပ်ပါသည့်တစ်ခုတည်းသောအနတ္တ Khaki ရေချိုးခန်းဗီဒို： OKASA ကက်ဘိနက်ပစ္စည်း： ထိုင်းရော်ဘာသစ်သားအသုံးပြုမှု： ရေချိုးခန်းပရိဘောဂဝှမ်းပါဝင်သည်: ဟုတ်ပါတယ်မူလအစ： ရှန်ဟိုင်း，ကြေးမုံပါဝင်သည်: ဟုတ်တယ်မော်ဒယ်နံပါတ်: 7123 ကောင်တာ: ဟုတ်တယ်စတိုင်: ခေတ်သစ်စတိုင် Faucet ပါဝင်သည်： တပ်ဆင်ခြင်းမရှိပါ : floating ဝန်ကြီးအဖွဲ့အရွယ်အစား: 1000*510*550မီလီမီတာအာမခံ:…
LED မှန်ဖြင့်ခေတ်မီပုံစံကုန်အမှတ်တံဆိပ်ပါသောအဖြူရောင်ရေချိုးခန်းအလှည့်ယူနစ်： OKASA ကက်ဘိနက်ပစ္စည်း： ထိုင်းရော်ဘာသစ်သားအသုံးပြုမှု： ရေချိုးခန်းပရိဘောဂဝှမ်းပါဝင်သည်: ဟုတ်ပါတယ်မူလအစ： ရှန်ဟိုင်း，ကြေးမုံပါဝင်သည်: ဟုတ်တယ်မော်ဒယ်နံပါတ်: 7647 ကောင်တာ: ဟုတ်တယ်စတိုင်: ခေတ်သစ်စတိုင် Faucet ပါဝင်သည်： တပ်ဆင်ခြင်းမရှိပါ : floating ဝန်ကြီးအဖွဲ့အရွယ်အစား: 1025*480*450မီလီမီတာအာမခံ: 5-နှစ်ကန့်သတ်ချက်…
LED မှန်ကို double dink slate ရေချိုးခန်းအနတ္တ
LED မှန်နှစ်ချက်ဒြပ်စင် slate ရေချိုးခန်းအနတ္တခေတ်သစ်စတိုင်အမှတ်တံဆိပ်အမည်： OKASA ကက်ဘိနက်ပစ္စည်း： ထိုင်းရော်ဘာသစ်သားအသုံးပြုမှု： ရေချိုးခန်းပရိဘောဂဝှမ်းပါဝင်သည်: ဟုတ်ပါတယ်မူလအစ： ရှန်ဟိုင်း，ကြေးမုံပါဝင်သည်: ဟုတ်တယ်မော်ဒယ်နံပါတ်: 7511 ကောင်တာ: ဟုတ်တယ်စတိုင်: ခေတ်သစ်စတိုင် Faucet ပါဝင်သည်： တပ်ဆင်ခြင်းမရှိပါ : ကြမ်းပြင်ကက်ဘိနက်အရွယ်အစား: 1300*560*850မီလီမီတာအာမခံ: 5-နှစ်…
စင်ပေါ်နှင့်အတူ High-end မီးခိုးရောင် slate ရေချိုးခန်းကက်ဘိနက်
စင်ပေါ်နှင့်အတူအဆင့်မြင့်မီးခိုးရောင် slate ရေချိုးခန်းကက်ဘိနက်ခေတ်သစ်စတိုင်အမှတ်တံဆိပ်အမည်： OKASA ကက်ဘိနက်ပစ္စည်း： ထိုင်းရော်ဘာသစ်သားအသုံးပြုမှု： ရေချိုးခန်းပရိဘောဂဝှမ်းပါဝင်သည်: ဟုတ်ပါတယ်မူလအစ： ရှန်ဟိုင်း，ကြေးမုံပါဝင်သည်: ဟုတ်တယ်မော်ဒယ်နံပါတ်: 7684 ကောင်တာ: ဟုတ်တယ်စတိုင်: ခေတ်သစ်စတိုင် Faucet ပါဝင်သည်： တပ်ဆင်ခြင်းမရှိပါ : ကြမ်းပြင်ကက်ဘိနက်အရွယ်အစား: 1200*560*860မီလီမီတာအာမခံ: 5-နှစ်…
စင်ပေါ်နှင့်အတူခေတ်သစ်စမတ်မှန် slate ရေချိုးခန်းကက်ဘိနက်
စင်ပေါ်နှင့်အတူခေတ်မီစမတ်မှန် slate ရေချိုးခန်းကက်ဘိနက်ခေတ်မီစတိုင်အမှတ်တံဆိပ်အမည်： OKASA ကက်ဘိနက်ပစ္စည်း： အထပ်သားအသုံးပြုခြင်း： ရေချိုးခန်းပရိဘောဂဝှမ်းပါဝင်သည်: ဟုတ်ပါတယ်မူလအစ： ရှန်ဟိုင်း，ကြေးမုံပါဝင်သည်: ဟုတ်တယ်မော်ဒယ်နံပါတ်: 7021 ကောင်တာ: ဟုတ်တယ်စတိုင်: ခေတ်သစ်စတိုင် Faucet ပါဝင်သည်： တပ်ဆင်ခြင်းမရှိပါ : ကြမ်းပြင် - ရပ်နေဝန်ကြီးအဖွဲ့အရွယ်အစား: 1200*530*850မီလီမီတာအာမခံ: 5-တစ်နှစ်တာအကန့်အသတ်ရှိသောအာမခံချက်…
ခေတ်မီအမှတ်တံဆိပ်တံဆိပ်ပါသောမီးခိုးရောင်ရေချိုးခန်းမီးခိုးရောင်အနတ္တဖြစ်သည်： OKASA ကက်ဘိနက်ပစ္စည်း： ထိုင်းရော်ဘာသစ်သားအသုံးပြုမှု： ရေချိုးခန်းပရိဘောဂဝှမ်းပါဝင်သည်: ဟုတ်ပါတယ်မူလအစ： ရှန်ဟိုင်း，ကြေးမုံပါဝင်သည်: ဟုတ်တယ်မော်ဒယ်နံပါတ်: 7683 ကောင်တာ: ဟုတ်တယ်စတိုင်: ခေတ်သစ်စတိုင် Faucet ပါဝင်သည်： တပ်ဆင်ခြင်းမရှိပါ : floating ဝန်ကြီးအဖွဲ့အရွယ်အစား: 900*530*520မီလီမီတာအာမခံ: 5-နှစ်ကန့်သတ်ချက်…
သစ်သားရေချိုးခန်းအချည်းနှီးသောထူးခြားသောဒီဇိုင်းသည် Modern Style Brand Brand ဖြစ်သည်： OKASA ကက်ဘိနက်ပစ္စည်း： ထိုင်းရော်ဘာသစ်သားမြောက်အမေရိက Ash Ashage： ရေချိုးခန်းပရိဘောဂဝှမ်းပါဝင်သည်: ဟုတ်ပါတယ်မူလအစ： ရှန်ဟိုင်း，ကြေးမုံပါဝင်သည်: ဟုတ်တယ်မော်ဒယ်နံပါတ်: 7101 ကောင်တာ: ဟုတ်တယ်စတိုင်: ခေတ်သစ်စတိုင် Faucet ပါဝင်သည်： တပ်ဆင်ခြင်းမရှိပါ : ကြမ်းပြင်ကက်ဘိနက်အရွယ်အစား: 1400*500*730မီလီမီတာအာမခံ: 5-နှစ်…
slate နှစ်ဆအနတ္တ floating ဟိုတယ်ဒီဇိုင်း
အဖြူရောင် slate နှစ်ထပ်အချည်းနှီးသောဟိုတယ်ဒီဇိုင်း Modern Style အမှတ်တံဆိပ်： OKASA ကက်ဘိနက်ပစ္စည်း： ထိုင်းရော်ဘာသစ်သားအသုံးပြုမှု： ရေချိုးခန်းပရိဘောဂဝှမ်းပါဝင်သည်: ဟုတ်ပါတယ်မူလအစ： ရှန်ဟိုင်း，ကြေးမုံပါဝင်သည်: ဟုတ်တယ်မော်ဒယ်နံပါတ်: 7519 ကောင်တာ: ဟုတ်တယ်စတိုင်: ခေတ်သစ်စတိုင် Faucet ပါဝင်သည်： တပ်ဆင်ခြင်းမရှိပါ : floating ဝန်ကြီးအဖွဲ့အရွယ်အစား: 1600*550*500မီလီမီတာအာမခံ: 5-နှစ်ကန့်သတ်ချက်…
အသစ်ဒီဇိုင်းကိုနှစ်ထပ်အချည်းနှီးသောလိမ္မော်ရောင်ရေချိုးခန်းအချည်းနှီးခေတ်သစ်စတိုင်အမှတ်တံဆိပ်အမည်： OKASA ကက်ဘိနက်ပစ္စည်း： ထိုင်းရော်ဘာသစ်သားအသုံးပြုမှု： ရေချိုးခန်းပရိဘောဂဝှမ်းပါဝင်သည်: ဟုတ်ပါတယ်မူလအစ： ရှန်ဟိုင်း，ကြေးမုံပါဝင်သည်: ဟုတ်တယ်မော်ဒယ်နံပါတ်: 7699 ကောင်တာ: ဟုတ်တယ်စတိုင်: ခေတ်သစ်စတိုင် Faucet ပါဝင်သည်： တပ်ဆင်ခြင်းမရှိပါ : ကြမ်းပြင်ကက်ဘိနက်အရွယ်အစား:…
ခေတ်သစ်နှစ်ဆ vanity ရေတပ်အပြာရေချိုးခန်းအချည်းနှီး
ခေတ်သစ်နှစ်ဆ vanity ရေတပ်အပြာရေချိုးခန်း vanity ခေတ်သစ်စတိုင်အမှတ်တံဆိပ်： OKASA ကက်ဘိနက်ပစ္စည်း： မြောက်အမေရိက Ash ကိုအသုံးပြုမှု： ရေချိုးခန်းပရိဘောဂဝှမ်းပါဝင်သည်: ဟုတ်ပါတယ်မူလအစ： ရှန်ဟိုင်း，ကြေးမုံပါဝင်သည်: ဟုတ်တယ်မော်ဒယ်နံပါတ်: 7527 ကောင်တာ: ဟုတ်တယ်စတိုင်: ခေတ်သစ်စတိုင် Faucet ပါဝင်သည်： တပ်ဆင်ခြင်းမရှိပါ : floating ဝန်ကြီးအဖွဲ့အရွယ်အစား: 1400*560*650မီလီမီတာအာမခံ: 5-နှစ်ကန့်သတ်ချက်…
ခေတ်သစ်ဇိမ်ခံ slate ရေချိုးခန်းအချည်းနှီးသောစကျင်ကျောက်ကောင်တာထိပ်
ခေတ်မီဇိမ်ခံပစ္စည်းသစ်သားရေချိုးခန်းအချည်းနှီးသောစကျင်ကျောက်ကောင်တာ Modern Modern Brand Brand Name： OKASA ကက်ဘိနက်ပစ္စည်း： ထိုင်းရော်ဘာသစ်သားအသုံးပြုမှု： ရေချိုးခန်းပရိဘောဂဝှမ်းပါဝင်သည်: ဟုတ်ပါတယ်မူလအစ： ရှန်ဟိုင်း，ကြေးမုံပါဝင်သည်: ဟုတ်တယ်မော်ဒယ်နံပါတ်: 7691 ကောင်တာ: ဟုတ်တယ်စတိုင်: ခေတ်သစ်စတိုင် Faucet ပါဝင်သည်： တပ်ဆင်ခြင်းမရှိပါ : ကြမ်းပြင် Mount ကက်ဘိနက်…
High-end ခရမ်းရောင်အချည်းနှီးသောရေချိုးခန်းဗီရိုသိုလှောင်မှု Modern Style အမှတ်တံဆိပ်： OKASA ကက်ဘိနက်ပစ္စည်း： မြောက်အမေရိက Ash ကိုအသုံးပြုမှု： ရေချိုးခန်းပရိဘောဂဝှမ်းပါဝင်သည်: ဟုတ်ပါတယ်မူလအစ： ရှန်ဟိုင်း，ကြေးမုံပါဝင်သည်: ဟုတ်တယ်မော်ဒယ်နံပါတ်: 7957 ကောင်တာ: ဟုတ်တယ်စတိုင်: ခေတ်သစ်စတိုင် Faucet ပါဝင်သည်： တပ်ဆင်ခြင်းမရှိပါ : ကြမ်းပြင်ကက်ဘိနက်အရွယ်အစား: 1100*530*850မီလီမီတာအာမခံ: 5-နှစ်ကန့်သတ်ချက်…
မီးခိုးရောင်အင်တုံအတွင်းပိုင်းမီးခိုးနှင့် LED မှန်ဖြင့်ခေတ်မီပုံစံကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်： OKASA ကက်ဘိနက်ပစ္စည်း： ထိုင်းရော်ဘာသစ်သားအသုံးပြုမှု： ရေချိုးခန်းပရိဘောဂဝှမ်းပါဝင်သည်: ဟုတ်ပါတယ်မူလအစ： ရှန်ဟိုင်း，ကြေးမုံပါဝင်သည်: ဟုတ်တယ်မော်ဒယ်နံပါတ်: 7518 ကောင်တာ: ဟုတ်တယ်စတိုင်: ခေတ်သစ်စတိုင် Faucet ပါဝင်သည်： တပ်ဆင်ခြင်းမရှိပါ : floating ဝန်ကြီးအဖွဲ့အရွယ်အစား: 1100*560*550မီလီမီတာအာမခံ: 5-နှစ်…
အနက်ရောင်ကိုရွှေ slate ရေချိုးခန်းမှန်ကက်ဘိနက်
ရွှေရောင် slate ရေချိုးခန်းမှန်ကက်ဘိနက်ခေတ်သစ်အမှတ်တံဆိပ်အမှတ်တံဆိပ်： OKASA ကက်ဘိနက်ပစ္စည်း： ထိုင်းရော်ဘာသစ်သားအသုံးပြုမှု： ရေချိုးခန်းပရိဘောဂဝှမ်းပါဝင်သည်: ဟုတ်ပါတယ်မူလအစ： ရှန်ဟိုင်း，ကြေးမုံပါဝင်သည်: ဟုတ်တယ်မော်ဒယ်နံပါတ်: 7517 ကောင်တာ: ဟုတ်တယ်စတိုင်: ခေတ်သစ်စတိုင် Faucet ပါဝင်သည်： တပ်ဆင်ခြင်းမရှိပါ : ကြမ်းပြင်ကက်ဘိနက်အရွယ်အစား: 800*530*850မီလီမီတာအာမခံ: 5-နှစ်ကန့်သတ်ချက်…
စင်ကြယ်သောခေတ်သစ်စတိုင်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်အတူစမတ်မှန်မီးခိုးရောင်အဖြူရေချိုးခန်းအချည်းနှီး： OKASA ကက်ဘိနက်ပစ္စည်း： ထိုင်းရော်ဘာသစ်သားအသုံးပြုမှု： ရေချိုးခန်းပရိဘောဂဝှမ်းပါဝင်သည်: ဟုတ်ပါတယ်မူလအစ： ရှန်ဟိုင်း，ကြေးမုံပါဝင်သည်: ဟုတ်တယ်မော်ဒယ်နံပါတ်: 7109 ကောင်တာ: ဟုတ်တယ်စတိုင်: ခေတ်သစ်စတိုင် Faucet ပါဝင်သည်： တပ်ဆင်ခြင်းမရှိပါ : ကြမ်းပြင်ကက်ဘိနက်အရွယ်အစား: 1000*510*850မီလီမီတာအာမခံ: 5-နှစ်…
Hot sale မိတ်ကပ် LED မှန်သည်အချည်းနှီးသောထိပ်
ခေတ်မီပုံစံအမှတ်တံဆိပ်၏ထိပ်ဆုံးတွင်အရောင်တောက်ပသော LED မှမိတ်ကပ်ပေးသည်： OKASA ကက်ဘိနက်ပစ္စည်း： ထိုင်းရော်ဘာသစ်သားအသုံးပြုမှု： ရေချိုးခန်းပရိဘောဂဝှမ်းပါဝင်သည်: ဟုတ်ပါတယ်မူလအစ： ရှန်ဟိုင်း，ကြေးမုံပါဝင်သည်: ဟုတ်တယ်မော်ဒယ်နံပါတ်: 7695 ကောင်တာ: ဟုတ်တယ်စတိုင်: ခေတ်သစ်စတိုင် Faucet ပါဝင်သည်： တပ်ဆင်ခြင်းမရှိပါ : floating ဝန်ကြီးအဖွဲ့အရွယ်အစား: 1355*510*550မီလီမီတာ…
လူကြိုက်များပတ်ပတ်လည်မှန် ဦး ဆောင်ခဲ့သည် 60 လက်မရေချိုးခန်းအချည်းနှီး
လူကြိုက်များပတ်ပတ်လည်မှန် ဦး ဆောင်ခဲ့သည် 60 လက်မရေချိုးခန်းအနတ္တခေတ်သစ်စတိုင်အမှတ်တံဆိပ်： OKASA ကက်ဘိနက်ပစ္စည်း： ထိုင်းရော်ဘာသစ်သားအသုံးပြုမှု： ရေချိုးခန်းပရိဘောဂဝှမ်းပါဝင်သည်: ဟုတ်ပါတယ်မူလအစ： ရှန်ဟိုင်း，ကြေးမုံပါဝင်သည်: ဟုတ်တယ်မော်ဒယ်နံပါတ်: 7100 ကောင်တာ: ဟုတ်တယ်စတိုင်: ခေတ်သစ်စတိုင် Faucet ပါဝင်သည်： တပ်ဆင်ခြင်းမရှိပါ : ကြမ်းပြင်ကက်ဘိနက်အရွယ်အစား: 1500*500*740မီလီမီတာ…
မျက်နှာသုတ်ပုဝါထည်နှင့်အတူဒီဇိုင်း floating ရေချိုးခန်းအနတ္တ
မျက်နှာသုတ်ပုဝါထိန်ထိန်ထားသောခေတ်မီအမှတ်တံဆိပ်အမှတ်တံဆိပ်ဖြင့်ဒီဇိုင်းအသစ်သောရေပေါ်ရေချိုးခန်းအချည်းနှီး： OKASA ကက်ဘိနက်ပစ္စည်း： ထိုင်းရော်ဘာသစ်သားအသုံးပြုမှု： ရေချိုးခန်းပရိဘောဂဝှမ်းပါဝင်သည်: ဟုတ်ပါတယ်မူလအစ： ရှန်ဟိုင်း，ကြေးမုံပါဝင်သည်: ဟုတ်တယ်မော်ဒယ်နံပါတ်: 7108 ကောင်တာ: ဟုတ်တယ်စတိုင်: ခေတ်သစ်စတိုင် Faucet ပါဝင်သည်： တပ်ဆင်ခြင်းမရှိပါ : floating ဝန်ကြီးအဖွဲ့အရွယ်အစား: 1000*510*400မီလီမီတာအာမခံ: 5-နှစ်…
နံရံတွင်တပ်ဆင်ထားသော LED မှန်ရေချိုးခန်းအချည်းနှီးသောယူနစ်များ
နံရံကပ်တပ်ဆင်ထား LED မှန်ရေချိုးခန်းအချည်းနှီးသောယူနစ် Modern Style အမှတ်တံဆိပ်： OKASA ကက်ဘိနက်ပစ္စည်း： ထိုင်းရော်ဘာသစ်သားအသုံးပြုမှု： အင်တုံပါဝင်သည်: ဟုတ်ပါတယ်မူလအစ： ရှန်ဟိုင်း，ကြေးမုံပါဝင်သည်: ဟုတ်တယ်မော်ဒယ်နံပါတ်: 7694 ကောင်တာ: ဟုတ်တယ်စတိုင်: ခေတ်သစ်စတိုင် Faucet ပါဝင်သည်： တပ်ဆင်ခြင်းမရှိပါ : နံရံကိုတပ်ဆင်ထားအစိုးရအဖွဲ့အရွယ်အစား: 1200*480*450မီလီမီတာအာမခံ: 5-နှစ်…
အစိမ်းရောင်အချည်းနှီးသောရေချိုးခန်းစုပ်ယူသည့်ပုံးသိုလှောင်ခြင်းခေတ်သစ်စတိုင်အမှတ်တံဆိပ်： OKASA ကက်ဘိနက်ပစ္စည်း： ထိုင်းရော်ဘာသစ်သားအသုံးပြုမှု： အင်တုံပါဝင်သည်: ဟုတ်ပါတယ်မူလအစ： ရှန်ဟိုင်း，ကြေးမုံပါဝင်သည်: ဟုတ်တယ်မော်ဒယ်နံပါတ်: 7692 ကောင်တာ: ဟုတ်တယ်စတိုင်: ခေတ်သစ်စတိုင် Faucet ပါဝင်သည်： တပ်ဆင်ခြင်းမရှိပါ : ကြမ်းပြင်ကက်ဘိနက်အရွယ်အစား: 1100*525*850မီလီမီတာအာမခံ: 5-နှစ်ကန့်သတ်ချက်…
အဆင့်မြင့်ဒီဇိုင်းရေချိုးခန်းအချည်းနှီးယူနစ် Modern Style အမှတ်တံဆိပ်အမည်： OKASA ကက်ဘိနက်ပစ္စည်း： ထိုင်းရော်ဘာသစ်သားအသုံးပြုမှု： ရေချိုးခန်းပရိဘောဂဝှမ်းပါဝင်သည်: ဟုတ်ပါတယ်မူလအစ： ရှန်ဟိုင်း，ကြေးမုံပါဝင်သည်: ဟုတ်တယ်မော်ဒယ်နံပါတ်: 7625 ကောင်တာ: ဟုတ်တယ်စတိုင်: ခေတ်သစ်စတိုင် Faucet ပါဝင်သည်： တပ်ဆင်ခြင်းမရှိပါ : ကြမ်းပြင် - ရပ်နေဝန်ကြီးအဖွဲ့အရွယ်အစား: 1800*500*850မီလီမီတာအာမခံ: 5-တစ်နှစ်တာကန့်သတ်ထားသောအာမခံကြေး။
ခေတ်မီ LED မှန်မှန်ရေချိုးခန်းနှင့်အတူစင်ပေါ်နှင့်
ခေတ်မီ LED မှန်မှန်နှင့်အတူခေတ်မီ LED မှန်၊： OKASA ကက်ဘိနက်ပစ္စည်း： ထိုင်းရော်ဘာသစ်သားအသုံးပြုမှု： အင်တုံပါဝင်သည်: ဟုတ်ပါတယ်မူလအစ： ရှန်ဟိုင်း，ကြေးမုံပါဝင်သည်: ဟုတ်တယ်မော်ဒယ်နံပါတ်: 7106 ကောင်တာ: ဟုတ်တယ်စတိုင်: ခေတ်သစ်စတိုင် Faucet ပါဝင်သည်： တပ်ဆင်ခြင်းမရှိပါ : floating ဝန်ကြီးအဖွဲ့အရွယ်အစား: 1000*500*400မီလီမီတာအာမခံ: 5-တစ်နှစ်တာအကန့်အသတ်ရှိသောအာမခံချက်…
ဇိမ်ခံကားနှစ်ဆ LED မှန်နှင့်နှစ်ဆတန်ဖိုး
ဇိမ်ခံကားနှစ်ဆ LED မှန်နှင့်နှစ်ထပ်အချည်းနှီးဖြစ်သော Modern Style အမှတ်တံဆိပ်： OKASA ကက်ဘိနက်ပစ္စည်း： ထိုင်းရော်ဘာသစ်သားအသုံးပြုမှု： ရေချိုးခန်းပရိဘောဂဝှမ်းပါဝင်သည်: ဟုတ်ပါတယ်မူလအစ： ရှန်ဟိုင်း，ကြေးမုံပါဝင်သည်: ဟုတ်တယ်မော်ဒယ်နံပါတ်: 7529 ကောင်တာ: ဟုတ်တယ်စတိုင်: ခေတ်သစ်စတိုင် Faucet ပါဝင်သည်： တပ်ဆင်ခြင်းမရှိပါ : ကြမ်းပြင် - ရပ်နေဝန်ကြီးအဖွဲ့အရွယ်အစား: 1500*500*880မီလီမီတာအာမခံ: 5-နှစ်ကန့်သတ်ချက်…
နံရံကပ်ချိတ်ဆွဲထားသည့်မီးခိုးရောင်ရေချိုးခန်းဗီရိုသိုလှောင်မှုခေတ်သစ်ပုံစံကြီးမားသောသိုလှောင်မှုစွမ်းရည်သည်ဤရေချိုးခန်းဗီဒို၏အဓိကအင်္ဂါရပ်ဖြစ်သည်, မိသားစုရဲ့အိမ်သာသုံးပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်. ကြီးမားသောမှန်တစ်ခုသည်လူနှစ် ဦး ကိုတစ်ပြိုင်တည်းကျေနပ်ရောင့်ရဲနိုင်ပြီးအသုံးပြုရန်အဆင်ပြေသည်. ခြုံငုံအရောင်သည်အများဆုံးဖြစ်သည်။
ကောင်တာမျက်နှာပြင်ရေချိုးခန်း vanity လက်ရာအောက်တွင် Modern Style ကက်ဘိနက်၏ကိုယ်ထည်သည်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလိုင်းများဖြစ်သည်, လှပပြီးအသေးစိတ်အကြမ်းဖျင်း, လက်သုတ်ပုဝါနှင့်ကိုက်ညီရန်အဆင်ပြေပြီးလက်တွေ့ကျသည်, နှင့်စမတ်ပတ်ပတ်လည်ကြေးအလှတရားတစ်ခုအဓိပ္ပာယ်ကထပ်ပြောသည်. ကုန်အမှတ်တံဆိပ်： OKASA ကက်ဘိနက်ပစ္စည်း： ထိုင်းရာဘာ ...